သူမရဲ့ခြေထောက်ကိုဆင်ခြေထောက်လို့ပရိတ်သတ်တွေထင်နေကြတဲ့အပေါ် သက်သေနဲ့တကွချပြလာတဲ့ ရွှေရူပါဦး – Cele Snap
သူမရဲ့ခြေထောက်ကိုဆင်ခြေထောက်လို့ပရိတ်သတ်တွေထင်နေကြတဲ့အပေါ် သက်သေနဲ့တကွချပြလာတဲ့ ရွှေရူပါဦး
October 12, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မော်ဒယ် ရွေရူပါဦးကတော့ အနုပညာလ မ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက် လို့သူမကိုယ်သူမ ပြောနေnကြပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ.ကတော့ သူမကိုတပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်.တစ်ချို့.ဆိုရင်သူ.မကို ခုမှမြင်ဖူးတာ.ဆိုပြီးတောင် ရေးသားနေကြပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်း.ကတော့ သူမကို အဘတွေ.က စီစဉ်ပေးမှု တစ်ခုMကြောင် ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ လူတွေ..အကြား ပွဲဆူသွားရပြန်ပါ.တယ်နော်..
အခုလဲ လူပြောများ.နေတဲ့ သူမရဲ့ခြေထောက်ဟာ လူတွေ ထင်နေသလို ဆင်ခြေထောက်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေနဲ့.တကွ ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်နော် သူမရဲ့ ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာများကို ပရိသတ်သိအောင် ပြန်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော်“ဆင်ခြေ.ထောက်မ” ဆိုသော မသမာသူ.တွေလုပ်ကြံ.ထားတဲ့ကိစ္စကို ရွှေ ပထမဆုံးနဲ့.နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်း.ချင်ပါတယ်… သိက္ခာ.အတွက်ရှင်းရ.ခြင်းဖြစ်ပါတယ်🙏ရွှေက တပ်ထောက်ခံ.သူဆိုတာမှန်ပါတယ် လူတိုင်း…လွတ်လပ်စွာ အားပေး ခွင့်ရှိ.ပါ…တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီ.ကလူတွေက သူမ.တူ ရန်သူ.လုပ်တာ ကြောင့် ရွှေကို အမျိုး.မျိုးတိုက်ခိုက်နေ.ကြတာပါ
ဆင်ခြေ.ထောက်မလို့အမည်တွင်စေ.တဲ့ပုံကိစ္စကို.ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ပုံက 2018.တုန်းက Novotel Hotelကပွဲတခုမှာေ ရွှရိုက်ထား.တာပါ… လူတွေက Photoshotတွေ…နဲ့ပုံစံမကျ.အောင်ခြေထောက်နဲ့…. ရင်သား.နေရာတွေကို ပြင်ပြီးဖြန့်ထား.တာပါနော်ရွှေ…အခုမှမူလပုံ ပြန်ရှာ…တွေ့လို့ ပုံ.အတုနဲ့ အစစ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြ…ထားပါတယ် 😇🙏ပုံအတု ကိုယုံခြင်လဲ… ယုံကြပါနော် မယုံရင် အပြင်မှာ…ဆုံရင် ခြေသလုံး.ကို စိတ်ကြိုက်လှန်ကြ.ည့်လို့ရပါတယ်နော်😃လူအချင်းချင်း…လှည့်ပတ်ခြ.င်း ကင်း….ရှင်းကြပါစေ😇
ပရိသတျကွီးတို့ရေ မျောဒယျ ရှရေူပါဦးကတော့ အနုပညာလ မျးကွောငျးမှာ မျောဒယျတဈယောကျ လို့သူမကိုယျသူမ ပွောနေnကွပမေဲ့ ပရိသတျတှေ.ကတော့ သူမကိုတပျခဈြသူလို့ပဲ သိထားကွပါတယျနျော.တဈခြို့.ဆိုရငျသူ.မကို ခုမှမွငျဖူးတာ.ဆိုပွီးတောငျ ရေးသားနကွေပါတယျ။ မကွာခငျရကျပိုငျးတုနျး.ကတော့ သူမကို အဘတှေ.က စီစဉျပေးမှု တဈခုMကွောငျ ခမျြးသာလာပွီဆိုလို့ လူတှေ..အကွား ပှဲဆူသှားရပွနျပါ.တယျနျော..
အခုလဲ လူပွောမြား.နတေဲ့ သူမရဲ့ခွထေောကျဟာ လူတှေ ထငျနသေလို ဆငျခွထေောကျမဟုတျကွောငျးသကျသနေဲ့.တကှ ရှငျးပွလာခဲ့ပါတယျနျော သူမရဲ့ ရှငျးပွတဲ့အကွောငျးအရာမြားကို ပရိသတျသိအောငျ ပွနျမြှဝပေေး လိုကျပါတယျနျော“ဆငျခွေ.ထောကျမ” ဆိုသော မသမာသူ.တှလေုပျကွံ.ထားတဲ့ကိစ်စကို ရှေ ပထမဆုံးနဲ့.နောကျဆုံးအနနေဲ့ရှငျး.ခငျြပါတယျ… သိက်ခာ.အတှကျရှငျးရ.ခွငျးဖွဈပါတယျ🙏ရှကေ တပျထောကျခံ.သူဆိုတာမှနျပါတယျ လူတိုငျး…လှတျလပျစှာ အားပေး ခှငျ့ရှိ.ပါ…တယျဒါပမေဲ့ ဒီ.ကလူတှကေ သူမ.တူ ရနျသူ.လုပျတာ ကွောငျ့ ရှကေို အမြိုး.မြိုးတိုကျခိုကျနေ.ကွတာပါ
ဆငျခွေ.ထောကျမလို့အမညျတှငျစေ.တဲ့ပုံကိစ်စကို.ပွောခငျြပါတယျ အဲ့ပုံက 2018.တုနျးက Novotel Hotelကပှဲတခုမှာေ ရှရိုကျထား.တာပါ… လူတှကေ Photoshotတှေ…နဲ့ပုံစံမကြ.အောငျခွထေောကျနဲ့…. ရငျသား.နရောတှကေို ပွငျပွီးဖွနျ့ထား.တာပါနျောရှေ…အခုမှမူလပုံ ပွနျရှာ…တှလေို့ ပုံ.အတုနဲ့ အစဈကို နှိုငျးယှဉျပွ…ထားပါတယျ 😇🙏ပုံအတု ကိုယုံခွငျလဲ… ယုံကွပါနျော မယုံရငျ အပွငျမှာ…ဆုံရငျ ခွသေလုံး.ကို စိတျကွိုကျလှနျကွ.ညျ့လို့ရပါတယျနျော😃လူအခငျြးခငျြး…လှညျ့ပတျခွ.ငျး ကငျး….ရှငျးကွပါစေ😇
ဇာဇာထက် အမှုရုပ်သိမ်းပေးလို့လွတ်လာတာမကြာသေးပေမယ့် အဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွေချပြအုံးမယ်ဆိုပြီး ဇာဇာထက်ကို စိန်ခေါ်လိုက်ပြန်တဲ့ နေလင်းကျော်
အစ်မဖြစ်သူရဲ့ပြသနာတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ သူမရဲ့ခံစားချက်တွေအတိုင်းစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်မိတဲ့ သံစဉ်မောင်